what, when, why: Command Prompt लाई Enable कसरी गर्ने ?
Command Prompt लाई Enable कसरी गर्ने ?
कहिले काही कुनै कारणबस वा बिशेष गरी Virus infection ले गर्दा कम्प्युटरको Folder Option,Show hidden files Option,Task Manager,Registry editor का साथसाथै CMD (Command Prompt) पनि disable हुन सक्छ । यसरी disable भएको CMD (Command Prompt) लाई तल उल्लेखित ३ तरिका मध्य कुनै एक तरिका अपनाएर फर्काउन सकिन्छ ।
तरिका - १ (Run method बाट)
१) start मेनुमा क्लिक गरेर Run मा जानुहोस् ।
२) तल लेखिएको code लाई कपि गर्नुहोस् र त्यहा पेस्ट गरीदिनुहोस् ।
३) Enter गर्नुहोस् ।
तरिका - २ (Registry Editor method)
१) Start मेनुमा क्लिक गरेर Run मा जानुहोस् ।२) त्यहा regedit टाईप गरेर Enter गर्नुहोस् ।
३) अब यो location सम्म जानुहोस्
४) दाँया तिरको DisableCMD मा डबल क्लिक गरी खोल्नुहोस् र value Data0राखिदिनुहोस् ।
५) Registry Editor लाई close गरिदिनुहोस् ।
तरिका - ३ (Group Policy method)
१) Start मेनुमा क्लिक गर्नुहोस् र Run मा जानुहोस् ।
२) त्यहा gpedit.msc टाईप गरेर Enter गर्नुहोस् ।
३) User Configuration > Administrative Templetes > System मा जानुहोस् ।
४) दाँया तिरको open Prevent access to the command prompt मा डबल क्लिक गर्नुहोस् ।
५) Disable मा set गर्नुहोस् ।
६) Group Policy Editor लाई exit गरिदिनुहोस् ।
यसरी कम्प्युटरको Command Prompt Disable भएको समस्या बाट मुक्त हुन सकिन्छ ।
saroj shakya said...
what to do if run disable by virus?
what to do if run was disable by virus
sir mero ta vhayan folder opt nai aayana